Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Mmetụta dị ukwuu nke COVID-19 na ndị ọrịa akụrụ na-eji dialysis
National Kidney Foundation (NKF) na American Society of Nephrology (ASN) na-ekwusi ike na ọnọdụ dị egwu ndị mmadụ na-arịa ọrịa akụrụ, bụ ndị na-adịghị ahụkebe, na-eche ihu ka ebili mmiri Omicron na-adịbeghị anya na-aga n'ihu na-agbasa n'etiti ndị ọrịa na ndị ọrụ na ụlọ ọrụ dialysis. Ọnọdụ nke COVID-19 na-ebute ọrịa siri ike, na-amanye oge ọgwụgwọ dị mkpụmkpụ maka ndị ọrịa, na-akawanye ụkọ nke ndị ọrụ na akụrụngwa na-egbochi ịnweta ọgwụgwọ ndụ a. Mmetụta COVID-19 na ndị nwere ọrịa akụrụ ebutela mbelata mbụ n'ọnụọgụ ndị ọrịa dialysis na United States n'ime akụkọ afọ 50 nke Mmemme ESRD Medicare.
Ụkọ ndị ọrụ na ọkọnọ emewokwa ka mmechi ụlọ ọgwụ dialysis na ndekọ azụ na-ebugharị ndị ọrịa n'etiti dialysis, ụlọ ọgwụ, na ebe ndị nọọsụ nwere nkà (SNFs). Ọ bụ ezie na ime ngwa ngwa ịnweta dialysis n'ụlọ na-eme ka ndị mmadụ ghara ịdị n'otu ma nwee ike ibelata ụkọ ụkọ ndị ọrụ, ngwọta a nwere ike agaghị edozi nnukwu nsogbu ahụ. Achọrọ ime ihe ozugbo iji hụ na ụlọ ọrụ dialysis nweta akụrụngwa na ndị ọrụ dị mkpa.
NKF na ASN kwadoro gọọmentị etiti, steeti na ime obodo:
• Banye aka iji belata ọgbaghara ọkọnọ (dịka ọmụmaatụ, dialysate concentrates) na ụlọ ọrụ dialysis n'ihi enweghị ụlọ nkwakọba ihe na ndị ọrụ ụgbọ ala.
• Kesaa ihe mkpuchi ihu dị elu nke gọọmentị kwadoro na ụlọ ọrụ dialysis.
• Kwụsịtụ iwu ugbu a nke erslọ Ọrụ Maka Medicare na Medicaid (CMS) chọrọ iji sirinji saline emejuru, nke na-adịghị n'ebe ụfọdụ, ruo mgbe nnukwu nsogbu gafere.
• Gbaa gọọmenti steeti na gọọmenti etiti ume ka ha kwe ka ndị nọọsụ na-akwụghachi ụgwọ ka ha kwenye maka omume intrastate, n'agbanyeghị ma steeti ahụ ọ bụ steeti kọmpat, n'oge nnukwu nsogbu a.
Enwere mmadụ 783,000 na United States ndị nwere ọdịda akụrụ, na ihe na-erughị 500,000 n'ime ndị a chọrọ dialysis na-adịgide ndụ nke a na-ebuga na ebe a na-agwọ ọrịa ugboro atọ n'izu, awa anọ kwa ụbọchị. N'oge ọgwụgwọ dialysis, ndị ọrịa na-anọdụkarị n'akụkụ ndị ọrịa na ndị ọrụ ndị ọzọ n'ụlọ ọrụ na-adịghị enwe ikuku nke ọma mgbe niile. Ọtụtụ n'ime ndị ọrịa a bụ ndị agadi, ndị na-enweghị ego, na ndị si n'obodo ndị nwere nsogbu akụkọ ihe mere eme, na ọtụtụ nwere ọnọdụ ndị dị ka ọrịa shuga na ọrịa obi.
N'agbanyeghị mbọ niile nke ụlọ ọrụ dialysis, nephrologists, na ndị dọkịta ndị ọzọ na-agbakọ mbọ iji belata mgbasa ya, COVID-19 na-aga n'ihu na-aga n'ihu site na akụrụngwa dialysis. Dabere na data sitere na Sistemụ Renal Data US, 15.8% nke ndị ọrịa niile na-arịa ọrịa dialysis na United States ebutela COVID-19 dị ka njedebe nke 2020. N'oge oyi 2020 ebili mmiri, ọnwụ kwa izu n'ihi COVID-19 ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20. % na ọnwụ kwa afọ n'oge 2020 bụ 18% dị elu karịa na 2019.1
N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ ndị a dị elu nke ọrịa na ọnwụ, ndị ọrịa dialysis ebuteghị ụzọ maka ịnweta ọgwụ mgbochi mgbe ọgwụ mgbochi ahụ dị otu afọ gara aga n'agbanyeghị na ihe akaebe na-egosi na nzaghachi mgbochi mgbochi na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-apụtachaghị ìhè na ndị ọrịa dialysis. Ọzọkwa, n'agbanyeghị ọkwa mgbochi ọrịa na-agbada ngwa ngwa n'ime ndị ọrịa dialysis karịa nke ndị mmadụ n'ozuzu, nri nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) ma ọ bụ erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) ebuteghị ndị ọrịa dialysis ụzọ mgbe akwadoro ọgwụ mgbochi atọ. n'August.2 Na mgbakwunye, ewepụrụ ndị ọrịa dialysis na otu ndị tozuru oke ịnata ọgwụgwọ antibody na-eme ogologo oge na-elekwasị anya nje SARS-CoV-2. N'ikpeazụ, National Institutes of Health enwetaghị ego maka nyocha COVID-19 iji nyere ndị nwere ọrịa akụrụ ma ọ bụ ọdịda aka na ngwugwu enyemaka ọ bụla nke afọ gara aga.
Ihe ịma aka ọzọ bụ enweghị ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị maka ndị mmadụ nwere ọdịda akụrụ. Ọ bụ ezie na ọgwụgwọ ndị na-ebelata ihe ize ndụ nke COVID-19 na-apụta, ihe ngosi ugbu a na-ewepu ndị nwere ọdịda akụrụ n'ihi na a na-ewepụkarị ndị a na ule ụlọ ọgwụ. Omume a adịghị anabata. NKF na ASN na-arịọ ndị nrụpụta ka ha hụ na ngwaahịa ndị a gụnyere doses maka ndị ọrịa nwere ọdịda akụrụ. Ọzọkwa, anyị na-agba FDA ume ka ọ mata ihe mgbochi na-ebelata n'ime ndị a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa akụrụ yana hụ na akwadoro ọgwụgwọ site na ikike iji ihe mberede (EUA) maka ndị ọrịa nwere mgbochi.
Ka nchịkwa Biden na-azụta usoro ọgwụgwọ COVID-19 ọhụrụ maka nkesa na United States, ọ dị mkpa na a na-ebute ndị ọrịa dialysis na ndị ọrụ ụzọ maka ịnweta. Ọdịda edobere ndị ọrịa dialysis ụzọ maka ịnweta ọgwụ mgbochi na mmalite nke ọrịa a nwere mmetụta dị ukwuu na ụlọ ọgwụ na ọnwụ. Anyị agaghị ekwe ka otu ihe ahụ mehiere mee ọzọ.
N'ikpeazụ, COVID-19 jikọtara ya na nnukwu ihe ize ndụ nke nnukwu mmerụ ahụ akụrụ (AKI), ọbụlagodi na ndị nwere ọrụ akụrụ echekwara, na-ebute ọrịa siri ike na ọbụna ọnwụ, na-achọkarị dialysis na ụdị ọgwụgwọ nnọchi akụrụ ndị ọzọ. Ugboro ugboro n'oge ọrịa na-efe efe, na ọzọ, n'oge ịwa ahụ Omicron dị ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọgwụ agbaala mbọ inye ndị ọrịa ọgwụgwọ a na-azọpụta ndụ n'ihi ụkọ ma ndị ọrụ zụrụ azụ na akụrụngwa.
Ọ dị mkpa na United States na-eme ike ya niile iji kwadebe maka ịwa ahụ n'ọdịnihu na ikpe COVID-19 ma gbochie ọnwụ na-enweghị isi n'etiti ndị anyị kacha emerụ ahụ. NKF na ASN dị njikere iso ndị na-eme iwu na ndị na-emepụta ihe na-arụkọ ọrụ iji mezuo ebumnuche a.
Eziokwu Ọrịa Akụrụ
Na United States, nde 37 ndị okenye na-eme atụmatụ na ha nwere ọrịa akụrụ, nke a makwaara dị ka ọrịa akụrụ na-adịghị ala ala (CKD) - na ihe dị ka pasent 90 amaghị na ha nwere ya. 1 n'ime ndị okenye atọ nọ na US nọ n'ihe ize ndụ maka ọrịa akụrụ. Ihe ize ndụ nke ọrịa akụrụ gụnyere: ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, ọrịa obi, oke ibu, na akụkọ ihe mere eme ezinụlọ. Ndị Black/African American, Hispanic/Latino, American Indian/Alaska Native, Asian American, ma ọ bụ nwa amaala Hawaii/Ndị ọzọ nke Pacific Islander nọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu maka ịmalite ọrịa ahụ. Ndị Black/African America nwere ihe karịrị okpukpu atọ karịa ka ndị ọcha nwere ọdịda akụrụ. Ndị Hispanik/Latinos dị okpukpu 3 karịa ka ndị na-abụghị ndị Hispanik nwere ọdịda akụrụ.
Ihe dị ka ndị America 785,000 nwere ọdịda akụrụ na-enweghị ike ịgbagha ma chọọ dialysis ma ọ bụ ntụgharị akụrụ ka ọ dị ndụ. Ihe karịrị 555,000 n'ime ndị ọrịa a na-anata dialysis iji dochie ọrụ akụrụ yana 230,000 na-ebi na ntụgharị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100,000 ndị America nọ na ndepụta nchere maka ntụgharị akụrụ ugbu a. Dabere na ebe onye ọrịa bi, nkezi oge echere maka mbugharị akụrụ nwere ike ịdị elu karịa afọ atọ ruo asaa.
Ọzọ na: Food na ọgwụ ọjọọ nchịkwa | Ụlọ Ọrụ nke Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa | Drug | Health | Covid-19 | United States
Karaoke na Laos? Jikere maka ọtụtụ ihe malite na Mọnde Covid-19, Health|
Ụlọ Ọrụ nke Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa Covid-19 Drug Food na ọgwụ ọjọọ nchịkwa Health United States